I-Sauerkraut ekhaya (iresiphi izochazwa ngokuningiliziwe kamuva) ingalungiswa ngezindlela ezahlukene. Kodwa namuhla sanquma ukwethula inketho esheshayo futhi elula. Kumele kuqashelwe ukuthi ukulungiselela okunjalo akuyona nje okumnandi futhi okunomsoco, kodwa futhi kuyasiza. Phela, akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi isaladi lama-sauerkrays inomuthi omkhulu kavithamini C.
Iklabishi elisondayo ekhaya: iresiphi yokupheka okusheshayo
Izingxenye nemishini edingekayo:
Usawoti uphekwe kancane - engeza ekuqapheni komuntu siqu;
Amaqathi ahlanzekile amanzi - 3-4 ama-pcs aphakathi.;
Iklabishi ukukhanya okumhlophe (okuluhlaza okwesibhakabhaka kanye nokusabalalisa okokuqala).
Ushukela weSand - 1-2 izinkezo ezinkulu;
Imbewu ye-fennel eyomile - i-dessert spoon (engeza uma ufisa);
Amabhanki e-Glass amathara amathathu, ummese, ibhodi yokusika, i- gauze ungqimba olubanzi, ipuleti ejulile, isitsha esikhulu.
Ukukhetha okuhle nokulungiselela imifino
Ngaphambi kokuba upheke ama-sauerkraut, kufanele uthenge yonke imifino edingekayo. Ukwenza lokhu, kuyisifiso ukuthatha amafoloko anesisindo esikhanyayo nobukhulu obukhulu. Kunconywa ukuba usebenzise isanqante encane neyomuthi yokudla okune-salty. Kudingeka ihlanzwe, ihlutshiwe, bese igayiwe ku-grater encane. Okulandelayo, kufanele ukhiphe iklabishi kusuka emagqumeni aphezulu bese uyisika ngotshani omncane kakhulu.
Ukwenza umsebenzi wokusebenza
Iklabishi elinesidlo ekhaya, iresiphi elula kakhulu, kulula kakhulu ukwenza. Ukuze wenze lokhu, yonke imifino eqoshiwe kufanele ifakwe emgodini omkhulu futhi ixutshwe kahle, i-pre-flavored ne-salt table kanye nesamba esincane se-sugar granulated. Imikhiqizo idinga ukuchotshozwa kuze kube yilapho ihambisa ijusi layo. Ngaphezu kwalokho, izithako ezinjengamahlamvu omisiwe we-dill zinganezelwa izithako. Banike isiphuzo i-flavour ekhethekile kanye nokunambitha.
Isigaba sokugcina ekulungiseleleni imifino billet
Iklabishi elidliwayo ekhaya, iresiphi ehlanganisa ubuncane bezithako, kufanele ibekwe engilazi ezintathu-litre izimbiza. Akudingekile ukuba inzalo izitsha. Ngakho-ke, yonke imifino ehlutshiwe kufanele idluliselwe kulesisitsha, iqine ngokugubha ngensimbi. Lokhu kufanele kwenziwe kuphezulu kakhulu. Uma kutholakala ijusi elikhulu kakhulu ebhange, kuvunyelwe ukuhlanganisa kancane. Okulandelayo, izitsha kufanele zifakwe epulazini elijulile, elimbozwe nge-multilayer gauze bese lihamba ekamelweni lokushisa izinsuku ezimbalwa.
Indlela yokuhlunga imifino efanele
Inqubo iklabishi elimuncu kufanele ihlatshwe ngenduku, ukuze wonke amagesi avele kuwo. Ngemuva kwesikhathi esishiwo ngenhla, umsebenzi wokugqoka kufanele uhlanganiswe ngilazi noma i-polyethylene lid, bese ufakwa esiqandisini.
Kumele uqaphele ukuthi isidlo esinikeziwe singalungiselela futhi sisebenzise ezinye izingxenye ezengeziwe. Isibonelo, i- sauerkraut ene-apula iyinambitha kakhulu . I-iresiphi yale billet ifana neyaphambilini, kodwa kanye ne-izaqathe emifino esemqoka kufanele ifakwe futhi yatshalwe isithelo esimuncu.
Izitsha ezimangalisayo nezilula ze-mackerel
I-Narsharab sauce: iresiphi, sebenzisa ekuphekeni
Jam from cornel ngamathambo: zokupheka ezintathu ezithakazelisayo
Pizza "Caesar". Iresiphi ekhaya
Amathiphu zendlela ubuyekeze NOD32
Fosh uFerdinand: Biography umlawuli omkhulu
Nezokungcebeleka Novorossiysk - ugongolo Wide. Ezizimele - nobunyonici eyinhloko impahla kolwandle
Oluluhlaza Color - kalula nobuhle kwelinye iphakethe
Indlela ukwandisa progesterone?
"Kurakina Dacha", indawo yokudlela e-Obukhovaya e-St Petersburg: incazelo, imenyu kanye nokubuyekezwa
Inqwaba Foundation ne isihlenga - omunye kungenzeka ongakhetha ukuze kwakhiwe indlu